सन्दर्भ १४ औं महाधिवेशन : के नेपाली कांग्रेसमा धर्मसापेक्षका पक्षधरहरु एक हुन सक्छन् ? – Dcnepal
सन्दर्भ १४ औं महाधिवेशन : के नेपाली कांग्रेसमा धर्मसापेक्षका पक्षधरहरु एक हुन सक्छन् ?
प्रकाशित : २०७८ असोज २४ गते १७:५८
नेपालको राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षता की धार्मिक सापेक्षता भन्ने बहस अहिले जोड्तोड्ले चलेको छ । धर्मनिरपेक्षता नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको कुरा हो । मन्दिर नै मन्दिरको देश भनेर चिनिने नेपाललाई इतिहासमा तपोभूमिको देश भनेर चिनिन्छ ।
नेपाललाई विदेशीको दवावमा धर्मनिरपेक्ष राखिएको आरोप एक पक्षले लगाई रहेका छन् भने अर्को पक्ष अहिले पनि धर्मसापेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रता वा सनातन हिन्दुधर्म वा सनातन ओमकार मान्ने हिन्दु, बौद्ध र किराँत सबैको एक समग्र नामाकरण गरेर मान्ने पक्षमा जानुपर्दछ भन्नेहरु छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा अबको १४ औं महाधिवेशनका सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर घोषणा गरेका डा. शशांक कोइरालाले हिन्दु धर्मका लागि मैले मात्र पहल गर्न सक्ने भएकोले म सभापतिको दावेदार भन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा के नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मसापेक्षका पक्षधरहरु एक हुन सक्दछन् भन्ने प्रश्न नयाँ ढंगले उठन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस भित्र अहिले उपाध्यक्ष रहेका बिमलेन्द्र निधि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा जोडतोडले लागेका छन् । नेपाली कांग्रेस भित्र धर्म निरपेक्षतालाई स्थापित गर्ने अभियानमा रहेका बिमलेन्द्र निधि शेरबहादुर देउवाको आर्शिवादले पार्टीको संगठनमा हावी भएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै आफ्नो विधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता मान्ने पार्टीको रुपमा आफूलाई परिचित गराएको थियो । २०६२\_०६३ को आन्दोलन पछि आएको गणतन्त्रमा हतपतमा केही कामहरु गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई छोडेर धर्म निरपेक्षताको पक्षमा निर्णय लिए जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हटाएर धर्मनिरपेक्षतालाई अंगाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस भित्र अहिले उपाध्यक्ष रहेका बिमलेन्द्र निधि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा जोडतोडले लागेका छन् । नेपाली कांग्रेस भित्र धर्म निरपेक्षतालाई स्थापित गर्ने अभियानमा रहेका बिमलेन्द्र निधि शेरबहादुर देउवाको आर्शिवादले पार्टीको संगठनमा हावी भएका थिए । पछिल्लो चरणमा बिमलेन्द्र निधि आफै सभापतिको दावेदार भएर अघि बढेकाले अब उनले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा गरेको पैरवीलाई शेरबहादुर देउवाले हुवहू रुपमा अघि बढाउने हुन कि सन्शोधन गरेर अघि बढ्ने हुन त्यो भविष्यको कुरा हो ।
जहाँसम्म शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका तरुण विभागका प्रमुख शंकर भण्डारीले सार्वजनिक रुपमा नै नेपाली कांग्रेस हिन्दु धर्मको पक्षमा जानु पर्दछ भनेर पैरवी गर्नु र यसमा नेपाली कांग्रेसको ठूलो जमातको समर्थन हुदै जानुले कतै आगामी महाधिवेशनमा हिन्दुधर्मको पक्षमा जोडतोडले कुरा उठ्ने त हैन भन्ने आशंका गरिदैछ । नेपाली कांग्रेसले यस अघि काठमाडौंमा गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेला भएको स्थानको बाहिरपट्टी हिन्दुधर्मको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । भेलामा मन्तव्य राख्नेहरुले समेत हिन्दु धर्मको पक्षमा खुलेर वकालत गरेका थिए । मिडियाले राम्रोसंग कभरेज गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको एक हस्तीका रुपमा चिनिएका स्व। खुमबहादुर खड्काले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा नेपालमा हिन्दुराज्य स्थापित गर्नुपर्दछ भनेर अभियान नै चलाएका थिए । उनको अभियानलाई उनको मृत्यु पछि पनि उनका अनुयायीहरुले जोडतोडले उठाई रहेका छन् । शंकर भण्डारीले हिन्दु धर्मको पक्षमा खुलेर पार्टी भित्रै आफ्नो धारणा राखिराखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्दै छन् भने कोही नेपाल हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छन् । हिन्दु राष्ट्र भन्नेहरु राजा विहिन हिन्दु राज्यको पक्षमा छन् भने हिन्दु अधिराज्य भन्नेहरु राजा सहितको हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा छन् । कोही हिन्दु हाम्रो धर्म होइन । यो त एउटा पन्थीमात्र हो । हामी सनातनी हौं भन्दैछन् ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत धार्मिक गतिविधिहरुमा सक्रिय भएका समाचारहरु भाइरल हुने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको वडा तहदेखि शुरु भएको अधिवेशनमा विजयी भएका नेताहरुको अभिव्यक्तिको समीक्षा गर्ने हो भने धेरै जसो सनातनदेखि चल्दै आएको नेपालको सनातनी धर्मको पक्षमा रहेको पाइएको छ । कांग्रेस भित्रका नेताहरुको शारिरिक हाऊभाऊ हेर्दा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अधिकांश देखिन्छन् । तर यसलाई कुन शब्दमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेमा उनीहरुबीच मै अन्यौलता देखिन्छ ।
कोही संविधानमा धर्म निरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिनु पर्दछ भन्दैछन् । कोही सनातन धर्म र कोही ओमकार परिवारको बहस गरिरहेका छन् । कोही हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्म मिश्रित हाम्रो सनातन धर्म भनेर अघि बढ्नु पर्दछ भन्दैछन् । संस्कृत विद् सत्यमोहन जोशीले एक सन्दर्भमा हामी २००७ सालत अघिसम्म सनातनी धर्मको पक्षमा थियौ । यहाँ हिन्दु भन्ने नै थिएन । सनातन धर्म भन्ने वित्तिकै अहिले टुक्राइएको हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मको समिश्रित रुप थियो । हिन्दु भनेर त पछि मात्रै आएको भन्ने तर्क जोशीको छ ।
जोशीकै तर्कलाई आधार मान्ने हो भनेपनि हामीले सनातन धर्मको पक्षमा लाग्ने खाका तयार गरेर नेपालमा धार्मिक सहिष्णुतालाई कायम राख्न नेपाली कांग्रेसले पहिले आफ्नो विधानमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ र सत्तामा भएको बेला धर्म कस्तो मान्ने भनेर संसदमा दुईतिहाई बहुमत पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । अथवा संसदबाट सम्भव भएन र ३ करोड नागरिककै सहमति लिएर गर्ने हो धर्मको बारेमा जनमत संग्रह गराउनु पर्दछ ।
धर्मको बारेमा जनमत संग्रहमा जाँदा धार्मिक द्वन्द्व समेत बढ्न सक्दछ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सचेत हुनुपर्दछ । जे गर्नु पर्ने हो त्यो १४ औं महाधिवेशनमा शसक्त रुपमा गर्नु पर्दछ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सभापतिका उम्मेदवारहरुले शासकीय प्रणाली, धर्म, निर्वाचन प्रणाली र आर्थिक उन्नतीका आधारहरुको खाका बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ ।
अहिलेसम्म उम्मेदवारी दिनेहरुले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र आर्थिक उन्नतीका पाटामा केही नयाँ सोच ल्याएको पाइदैन । धर्मका लागि सभापतिका उम्मेदवारहरु मध्ये डा. शशांक कोइराला र बिमलेन्द्र निधिले मात्र बोल्ने गरेको पाइन्छ ।
डा। शशांक कोइराला हिन्दुधर्मको पक्षमा बोल्दै आउनु भएको छ भने बिमलेन्द्र निधि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ । यो दुई विचार देख्दा प्रकाशमान सिंह, बिमलेन्द्र निधि र डा. शशांक कोइरालाबीच एक उम्मेदवार हुने पटक पटकको बैठक औचित्यहीन, डिनर र लञ्चपार्टीमा मात्र सिमित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई बटम लाइन बनाएर हिड्न चाहेका थिए । तर उनलाई छोरी सुजाताले धोखा दिएको प्रसंग खुबै चर्चामा आएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धर्म निरपेक्षाको पक्षमा हस्ताक्षार गराउन उनका सल्लाहकार र छोरीले खेलेको भूमिकाका बारेमा अर्को बहसमा विस्तृतमा छलफल गरिने छ । यहाँ यत्तिकै भनौ धर्म निरपेक्षका लागि मोटो रकम प्राप्त गर्नेहरुको जालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला फस्न गए ।
पछिल्लो समय विमलेन्द्र निधिले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको उद्घाट्न गर्दा धार्मिक अनुष्ठान नै लगाए भन्ने कुरा मिडियामा छाएको थियो । उनी पनि हिन्दु धर्मको शरणमा गए भन्ने आरोप लाग्यो । तर त्यो कुरा नसेलाउँदै एक सञ्चारमाध्यममा निधिको अन्तर्वार्ता आयो जसमा पशुपति र जानकी मन्दिरमा राजनीतिक पार्टीको झण्डा गाड्नका लागि हिन्दु धर्म ल्याउन खोजेको हो भनेर बम्किए । उनको आशय थियो, हिन्दु राज्य भएमा पार्टीहरुले पशुपति र जानकीमन्दिरमा पार्टीको झण्डा गाड्छन् । तर उनले यसो भनिरहँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा हिन्दु धर्म लेखिएको भएपनि कसैले पशुपति र जानकी मन्दिरमा पार्टीको झण्डा नराखेको बुझेका रहेछन् । हो, विचार राख्न पाइन्छ । तर, त्यसले पुरानो अवस्थामा के भइरहेको थियो भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । नेपालको संविधानमा हिन्दु राज्य लेखिदापनि यहाँ अन्य सबै धर्मले फुल्ने फल्ने अवसर त पाइरहेकै थिए ।
राज्यले धर्म मान्नु हुदैन भन्ने धारणा बामपन्थी धारणा हो । बामपन्थीहरु धर्मलाई अफिमका रुपमा मान्दछन् । जुन नेपालमा सम्भव नै छैन । यहाँ दैनिक जीवनमा जसलेपनि कुनै न कुनै धर्मको सहारा लिएकै हुन्छन् । राज्यले धर्ममान्नु हुदैन भन्नेहरुले के बुझ्नु पर्दछ भने नेपालका प्रायजसो धार्मिक स्थलहरु सार्वजनिक नै छन् । पशुपति होस वा पाथिभरा, हलेसी होस या मुक्तिनाथ सबै सरकारको सम्पत्ति हो । त्यसैले पनि सरकारले सार्वजनिक धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र प्रचार प्रसारको लागि खर्च गर्नु पर्दछ । यो सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ ।
गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सरकारलाई कत्ति अप्ठेरो परेको थियो भन्ने सबैले बुझेकै छन् । नेपालमा धार्मिक पर्यटनलाई बढाएर आर्थिक उन्नती गर्नका लागि पनि प्रकृतिले दिएको, ऐतिहासिक प्रणामहरुले जुराई दिएको सनातनी धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको त हो नै यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरुले पनि अगुवाई गर्नु पर्दछ । जसको शुरुवात भनेकै नेपालको संविधानबाट धर्म निरपेक्षतालाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता वा सनातन धर्म वा हिन्दु धर्म वा धर्मका विज्ञहरुसंग छलफल गरेर त्यस्तो केही शब्द राखौं जसले धर्मको संरक्षण गर्न सरकार बाध्य होओस । यसले कला, संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाजको संरक्षण र प्रचारप्रसार हुन गई देशको पहिचान बढेर जान्छ । जसले राष्ट्रियतालाई समग्रमा बलियो बनाउँछ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा धर्मको विषयलाई एउटा शसक्त मुद्धा बनाउनु पर्दछ । यसको शुरुवात गर्न तस्मिएका डा. शांशक कोइराला स्वयंले कस्तो शब्द राख्ने भन्ने बारेमा पार्टी भित्रै वा शुभेच्छुकहरु माझ अहिलेदेखि नै छलफल चलाउनु पर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा धर्मको विषयलाई एउटा शसक्त मुद्धा बनाउनु पर्दछ । यसको शुरुवात गर्न तस्मिएका डा. शांशक कोइराला स्वयंले कस्तो शब्द राख्ने भन्ने बारेमा पार्टी भित्रै वा शुभेच्छुकहरु माझ अहिलेदेखि नै छलफल चलाउनु पर्दछ । कोइराला आफै महामन्त्री भएकाले महाधिवेशको उहाँले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन वा अन्य दस्तावेजमा यसलाई समावेश गरेर पार्टी भित्रै पारित गराउन सक्नु पर्दछ । हैन भने जनमत बटुल्न चलाएको हल्लामात्र हो कि भन्ने आमनागरिकहरुले शंकागर्ने ठाउँ रहन्छ ।
डा. शशांक कोइरालाले आफूमात्र होइन, पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पनि आफ्नो अभियानप्रति आकर्षित गर्नु पर्दछ । आफ्ना कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरुलाई धर्मको पक्षमा वकालत गर्न लगाउनु पर्दछ । मिडिया गएको बेला सम्झिएर धर्मको लागि जनमत संग्रह गराउँछु भनिदियो, भारतको संस्थापन पक्षलाई खुसी पार्न बोलिदियो तर त्यसको लागि आधारहरु तयार गर्न कुनै कसरत नग¥यो । यसो भयो भने डा. शशांक कोइराला समेत निर्णय लिन खोज्ने तर त्यसका लागि सही कदम चाल्न असफल नेताका रुपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन् ।
हेरौं, नेपाली कांग्रेसमा कुन कुन नेताहरु धर्मको सम्बन्धमा के के सवाल उठाएर महाधिवेशनमा अग्रसर हुन्छन् ? उनीहरुको विचार र गतिविधिलाई नागरिकहरुले सुक्ष्मरुपमा सुनिरहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको धर्म प्रतिको दृष्टिकोणले पनि प्राप्त हुने मतमा असर पार्ने छ । सिंगो कांग्रेस भित्र धर्म प्रतिको धारणा एक छैन । पार्टी भित्र धर्मसापेक्षताका पक्षधरहरु गोलबन्ध हुनु आवश्यक छ । धार्मिक दृष्टिकोण एउटै बनाउन समेत नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशन सफल हुनुपर्दछ ।